Zute ndị dike njem nlegharị anya na World Travel Market London taa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ mkpakọrịta » Zute ndị dike njem nlegharị anya na World Travel Market London taa
Akụkọ mkpakọrịta • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • Akụkọ UK na -agbasa • WTN
eTurboNews onye nkwusa Juergen Steinmetz, onye bụkwa onye isi oche nke World Tourism Network, na onye isi oche Board nke African Tourism Board rutere London na Sọnde, dị njikere ịgba akaebe na isonye na ịmaliteghachi ihe ngosi ahia ahia ụlọ ọrụ njem nke abụọ kachasị n'ụwa - Ahịa Njem Ụwa nke London na Nọvemba 1-3.
Taa, World Travel Market na London ga-emeghe ọnụ ụzọ ya n'elekere 10.00 nke ụtụtụ na Excel Exhibition Center na London.
Ndị isi njem na njem nlegharị anya si gburugburu ụwa na-abịakwa London ọzọ iji zute, kelee ma kparịta ụka.
Network Tourism Network ga-anabata ndị dike njem nlegharị anya taa, na Mọnde na elekere anọ nke ehihie na Kenya Tourism Board Stand AF 4.00
Ọbụghị naanị Ahia njem mba uwa ohere imepụta, imepụta na ire ngwaahịa njem ọhụrụ n'afọ COVID-19, mana ọ bụkwa ohere maka ndị na-akwagharị ma maa jijiji ụlọ ọrụ ahụ ijikọ ọzọ n'ime mmadụ. Njikọ a ga-enwerịrị olu siri ike iji duga njem azụ n'ụzọ.
"Ọgba aghara ahụ kwesịrị ịpụ na njem ọzọ." Juergen Steinmetz kwuru. “World Tourism Network dị njikere isonye na mkparịta ụka sara mbara. Enweghị azụmahịa dị ka ọ na-emebu, yana iso ndị niile metụtara ya na-arụkọ ọrụ bụ isi ihe na-eme ka ọ nwee ihe ịga nke ọma. "
Ndị njem nlegharị anya ghọtara site na Network Njem Nleta Ụwa A na-akpọ gị òkù na Kenya Stand (AF150) taa na elekere anọ nke ehihie. (November 4.00) Nzukọ a ga-amata ndị dike abụọ ọhụrụ sitere na Israel na Barbados- na ọtụtụ ndị ọbịa na-atụ anya na ha ga-eso na nzukọ mbụ NON ZOOM maka ndị òtù WTN na ndị na-ege WTM.
E hiwere World Tourism Network ka ndị Iwughachi njem Mkparịta ụka malitere site n'akwụkwọ a, PATA, African Tourism Board, na Nepal Tourism Board na Machị 2020 n'akụkụ nke ITB Berlin kagburu.
Ihe karịrị nzukọ mbugharị 200+ hibere mmekorita na njem njem na njem nlegharị anya site na mba 128. Ebumnobi maka WTN bụ ịtinyekwa olu na ndị egwuregwu pere mpe na ndị na-ajụ obere na njem na njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ.
Onye mbụ njem nlegharị anya dike, Hon. Najib Balala, odeakwụkwọ nke Tourism maka Kenya ga-anabata ya. Atụkwa anya na ọ ga-abịa bụ Hon. Edmund Bartlett si Jamaica, na Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO - niile n'ime ndị dike njem njem mbụ nke òtù a ghọtara.
Barbados ga-ewebata dike njem nlegharị anya ọhụrụ ya, a na-atụkwa anya na ya na onye ozi, onye isi oche nke Board Tourism na ndị ọrụ TV nke mba ga-eso.
Christian Rosario, eTurboNews Onye na-ese foto na-enweta ụgwọ ọrụ mbụ ga-ese foto dị ịtụnanya ka ọ kesaa.
Na Wednesday 11.30 am, Dr. Peter Tarlow, onye isi oche nke WTN ga-ekwu okwu na Oge nchekwa Cyber na Travel Forward na World Travel Market.
N'agbanyeghị na ị na-enweta ụfọdụ n'ime nnukwu mmebi data na afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ njem ka jupụtara na oghere nchekwa. Ndị isi ụgbọ elu na agbụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-agbasi mbọ ike idobe usoro ntanetị ha ọbụlagodi mgbe mmebi data gara aga na mwakpo cyber kpugheere ozi nke nde ndị ahịa wee nweta ntaramahụhụ sitere n'aka ndị na-achịkwa nzuzo. Ugbu a karịa mgbe ọ bụla, ọ dị oké mkpa ka ụlọ ọrụ njem na-aga n'ihu na oge mgbanwe na usoro ndị dị mkpa iji gbochie ụdị egwu dị otú ahụ. N'oge nnọkọ a, otu ndị ọkachamara ga-ekekọrịta nghọta n'ime usoro ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ime iji chebe ihe egwu na ihe egwu cyber iji chebe data ndị ahịa ha.
Ahịa njem njem ụwa ga-anabata Mgbakọ Minista UNWTO dị ka mgbe niile na WTTC. A na-atụ anya na Saudi Arabia n'afọ a ga-arụ ọrụ dị oke mkpa.
Zute m na WTM
Juergen Steinmetz dị njikere izute eTurboNews ndị na-agụ akwụkwọ n'onwe ha na Ahịa Njem Ụwa. Biko kpọtụrụ na WhatsApp: +1-808-953-4705 ma ọ bụ email [email protected]